चिकित्सकलाई बाजागाजासहित स्वागत गरे गाउँलेले – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:58:58
जापानी समय : 07:13:58
चिकित्सकलाई बाजागाजासहित स्वागत गरे गाउँलेले
16 March, 2017 17:51 | जन सरोकार | comments | 12300 Views
जनताको स्वास्थ्यमा सरकारले वर्षेनी अबौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामाा दक्ष चिकित्सक बस्नै मान्दैनन् । उनीहरु शक्तिको आडमा राजधानी तथा सुविधासम्पन्न शहरमा बसेर पैसा कमाउन तल्लिन रहन्छन् ।
गाउँघरमा भने जनता सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् । दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि चिकित्सकको अनुसार देख्नु पनि दुर्लभ हुने गरेको छ । त्यसैले त उनीहरु गाउँमा चिकित्सक आए भने बाजागाजासहित स्वागर्त गर्छन् । यस्तै भएको छ बैतडीको मेलौलीमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ।
त्यहाँ १६ वर्षपछि चिकित्सक हाजिर भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् । चिकित्सकलाई स्थानीय बासिन्दाले बाजागाजासाथ स्वागत गरेका छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको १६ वर्षपछि डा. जीवन कार्की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा यसै साता हाजिर हुनुभएको हो ।
विसं २०५६ मा स्थापना भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पहिलो पटक स्थायी दरबन्दी चिकित्सक आएको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक मुकेश दयालले बताउनुभयो ।
आफ्नै ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक आएपछि आफूहरु धेरै खुसी भएको स्थानीय समाजसेवी शङ्करदत्त जोशीले बताउनुभयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक आएपछि समान्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने मेलौलीका केशवसिंह भाट बताउनुहुन्छ ।
मेलौलीमा चिकित्सक आएसँगै स्वास्थ्य बीमाको सेवासमेत सुरु हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि उपचारका लागि सूचीकृत संस्थामा राखिएको छ । १६ वर्षपछि आफ्नो गाउँमा चिकित्सक पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाले स्वतःस्फूर्तरुपमा स्वागत गरेको स्वास्थ्य सहायक दयालले बताउनुभयो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा गुणराज अवस्थीले आफूले बैतडीमा आएदेखि नै मेलौलीमा चिकित्सकको दरबन्दी परिपूर्तिका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा धाएको बताउनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग धेरै पटक अनुरोध गरेपछि बल्ल चिकित्सक आएका छन् ।”
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक आएपछि सामान्य बिरामीले पनि भारतीय अस्पताल अथवा जिल्ला अस्पताल बैतडी, उपक्षेत्रीय अस्पातल डडेल्धुरा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने मणिलेक मावि काँडा मेलौलीका प्राचार्य देवदत्त कलौनीले बताउनुभयो ।
भारतमा चमेराबाट सर्ने ‘निपा भाइरस’को संक्रमण, नेपालमा कति खतरा ?
टिपरको ठक्करबाट तीन जनाको मृत्यु